Ọdịiche ahụ - Ụmụ nwoke hụrụ n'anya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Ogologo nkezi 3.4 / 5 si 13
NA / A, o nwere ihe nlere 31.2K
Adult, Lovemụ nwoke Lovehụnanya, mma, tozuru okè, Weebụ, Akwụkwọ ntanetị, Yaoi
"Ị chọrọ ego ahụ, ma enwere m ọtụtụ ya ... Ị cheghị na ọ bụ ahia ziri ezi?"
"Tae-i Kwon" bụ onye ntorobịa na-ata ahụhụ n'okpuru ugwu nke ụgwọ. N'agbanyeghị otú ọ na-arụsi ọrụ ike, ọ dị ka ụgwọ ahụ ka na-eto eto. N'ịbụ onye a chụgara n'otu akụkụ, ọ na-enweta ọrụ na-akwụ ụgwọ dị elu na ụlọ mmanya nwoke nwere mmasị nwoke, ọ bụkwa ebe a ka ọ zutere CEO nke ebe ahụ, Odo Seo. Odo, onye onye na-achụ ihe omimi na-achọgharị, na-atụ aro ka ya na Tae-i nwere mmekọrịta adịgboroja. Ihe na-amalite dị ka ngwa ngwa iji nweta ego maka Tae-i na-aghọ mgbagwoju anya mgbe ọ malitere ịhụ Odo Seo na-enwe mmasị n'anya. Mana ka ọ na-abịaru nso na Odo, ka ihe egwu dị na gburugburu Odo na-abịaru nso iji kpochie Tae-i. Mgbe njirimara onye stalker Odo ji nwayọọ nwayọọ malite ikpughe na ezi ebumnobi Odo pụta ìhè, kedu ka ọ ga-esi maa jijiji ndụ Tae-i gburugburu?
Youkoso Worldwa Ọhụrụ
Stanley Hawk Mba Jikenbo - Kamen
Seifukusha Ka Kedamono Gaa Boku